नेताले पार्टी फुँटाउछन,कलाकारले जोडी ! – YesKathmandu.com
बडो विचित्रको सम्बन्ध छ हाम्रा कलाकर्मीहरुको । एकातिर च्यातिने,अर्काेतिर जोडिने । कलाकर्मीहरुको जोडी महको जोडी जस्तो ‘व्राण्ड’कहिले कतै भेटिएन । ध्रुव हाडा र राजपाल थापाबाट शुरु भएको हास्यजोडी बाँध्ने चलन महपछि फेसनै बनेको हो । यो बीचमा कति आए, कति गए भनिसाध्य छैन । तर, थोरै समय नै जमेकाहरूको हिसाब गर्दा जुटानसँगै फुटान भएको देखिन्छ ।
एकताका खेम शर्मा र शिवहरि पौडेलको हास्यजोडी खुवै चल्तीमा थियो । नेपाली दर्शक/श्रोताको दिलखुस बनाएको यो जोडीको आफ्नै मन भने एकदशक नपुगी नै फाटिहाल्यो । उस्तै थियो,एकताका दमन रुपाखेती र जितु नेपालको जोडी ।  । तर, यी दुई कलाकारको मनमुटावले सहयात्रालाई घिर्लिङघाटमा पुर्याइछाड्यो ।
मह जमेको देखेर हल बाँधिएका किरा अर्थात् किरण केसी र राजाराम पौडेलको जोडी पनि अहिले विछोडमा छ । देश पनि हेरिने, मुख पनि फेरिने भन्दै राजाराम अमेरिका उडेपछि किरण शिवहरि पौडेलसँग लहसिए त्यो जोडी पनि फ्लप भयो । यता तीतोसत्यमा हुँदा जमेका निराजन सिग्देल र गोपाल नेपाल ‘छन्दे’को छनि को होस् या मेरी वास्सै का सुरज चापागाइँ (बान्द्रे) र राजु पौडेलको सुरा जोडीको ताल बिग्रेको धेरै भइसक्यो ।
सन्तोष पन्त,रवीन्द्र खड्का, शैलेन्द्र सिंखडा,उज्ववल भण्डारी, शिवहरि वैरागी,रमेश अधिकारी, मोहन मिश्र,मनोज आचार्य लगायतका जोडी फुटानकै सिकार भए । दीपाश्री हावी हुँदा दीपकराज गिरी र गोपाल मैनालीको सम्बन्ध फुटानमा परिणत भयो । दीपक/दीपा जस्तै लामो समय लोकप्रियतामा रहँदासमेत नफुट्ने जोडीमा केदार घिमिरे ‘माग्नेबूढो’ र सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ को जोडी थियो  । बीचमा सुन्तली हाबी हुँदा यो जोडी पनि दीर्घकालसम्म टिक्न सकेन ।
यता,टुटेको मित्रता मित्रता दिवसकै अवसर पारेर जितु नेपाल र दमन रूपाखेतीले पुर्नमिलन भएको सार्वजनिक गरेका छन् । १० वर्षपछि फेरिसँगै हुन लागेको उक्त मित्रता प्रज्ञा भवनमा प्रर्दशन हुने गाइजात्रा सम्मका लागि हो वा दीर्घकालसम्म हो ? एक पटक च्यातिएको मन फेरि सहजै नच्यातिएला भन्ने आधार न त जितुसँग छ न त दमनसँग । यद्यपि यिनीहरुको मित्रता कतिसमयसम्म सँगै जाला ,त्यो समयले नै बताँउला ।